Vanhu: Anjelica Huston, nyeredzi yemufirimu The Addams Family, hazvizivikanwi makore 25 mushure mekunge basa rake risingakanganwiki - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Vanhu: Anjelica Huston, nyeredzi yemufirimu The Addams Family, hazvizivikanwi makore 25 mushure mokunge aine chikamu chisingakanganwiki
Kune vazhinji vana vemakore 90, 1991 yakaunza epic blockbuster The Addams mhuri. Mutevedzeri wekuda fantasy wakanga wakabva pamifananidzo yevashandi yakagadzirwa naCharles Addams.
Yakatumirwa na Olivia Хэнд (@devushka_veruca) on May 5, 2019 pa 10: 29pm PDT
Isu tose taida kugoverwa kwefirimu iyi, asi kana paiva nomunhu mumwe chete akamira kune vamwe, akanga ari Anjelica Huston, uyo akatamba mudzimai uye amai, muroyi Morticia Addams.
Pamberi paAnjelica akava Morticia, mutambi wenyika iye zvino ava nemakore 67, akanga atova mambokadzi weHollywood. Baba vake, John Huston, vaiva mutungamiriri uye sekuru vake, Walter Huston, akanga ari Oscar.
Post by ᴍᴛʀᴛɪᴄɪᴀ ᴀᴀᴍᴀᴍᴀᴍ ((@gcthicmilf) on May 6, 2019 pa 5: 51pm PDT
Mune hurukuro ne The GuardianAnjelica akaratidza kuti paakazobatana kuzoita basa raMorticia, akakumbira mumwe mutambi wechikamu kuti aite basa, kunyange zvazvo aida zvinhu zvose zvakaratidzwa cinema.
Zvisinei, vatungamiri vakatsigira kuti ndiye iye waaida. Anjelica akatsanangura kuti kana pane chimwe chinhu chaaifarira mufirimu, chaive mvere, mazamu uye chiedza.
Handina kumbofarira kutarisa kwakanaka, uye ini nguva dzose ndaifarira maitiro aya akajeka, saka ndaifara zvechokwadi nenzira iyo cameraman akandivhenekera muna Morticia.
The Addams mhuri gore rino ndicho chirangaridzo chake che 25th, uye zviri pachena kuti Anjelica yakashandura maererano nemukadzi waaiva.
Kunyange zvazvo achiri kuchengeta mweya wake wenyama, Anjelica iye zvino ari kumativi ose, anowedzera kukwegura. pashure The Addams mhuri, basa rake harina kumbomira, Anjelica akaramba achishanda nesimba.
Akaonekwa mune zvakawanda zvemafirimu aWes Anderson, kusanganisira Onboard Darjeeling Limited (The Darjeeling Limited) et The Tenenbaum Family (The Royal Tenenbaums).
Zvakanaka kuona kuti gore iroro harina kubata paAnjelica Huston yakanaka. Akaramba achiramba achibwinya pasinei nemakore!
VERENGA ZVIMWE: Basa raunyanzvi! Eva Longoria anozarura makumbo ake akakwana mune imwe nzira inopesana yakashongedza paCannes Film Festival
MuCannes Restaurant Côté Jardin naChristophe Ferré, Esprit Bistrot pedyo neBoulevard Carnot - 2019